Dana Mudah Apk Download maimaim-poana ho an'ny Android | APKOLL
Manana olana amin'ny farany ve ianao ary tsy manome ny fampindramam-bola anao ny banky? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ny vahaolana tsara indrindra ho anao, izay fantatra amin'ny anarana hoe Dana Mudah. Fampiharana Android izy io, izay manolotra ny mpampiasa hahazo fampindramam-bola haingana sy be dia be ao anatin'ny minitra vitsy.
Fantatrao amin'izao andro izao ny iray amin'ireo olana mahazatra indrindra dia ny vola, izay vahaolana amin'ny olanao rehetra. Noho izany, tsy maintsy miasa sy mitady vola ny olona, ​​​​fa indraindray misy olana mifandray amin'ny vola rehefa tsy manana izany. Tsy mila manahy momba ny vola ianao, manana an'ity app ity ianao izao.
Inona no atao hoe Dana Mudah App?
Dana Mudah dia fampiharana fampindramam-bola Android, izay manome ny mpampiasa hahazo serivisy fampindramam-bola eo noho eo. Afaka mahazo fampindramam-bola eo noho eo ianao miaraka amin'ity fampiharana ity ary mamaha ny olana rehetra mifandraika amin'ny volanao. Izy io dia manome sehatra maimaim-poana ho an'ny mpampiasa hiditra sy hahazoam-bola amin'ny zanabola ambany indrindra.
Alohan'ny hanombohantsika manome ny fampahalalana rehetra momba ity sehatra ity, misy fetra vitsivitsy azo ampiasaina ho an'ireo mpampiasa. Tokony ho fantatrao ny momba azy ireo raha te hampiasa an'ity fampiharana ity ianao. Raha tsy misy ireo fetra ireo dia tsy mahazo mahazo indram-bola ianao.
Ny fampiharana dia novolavolaina manokana ho an'ny teratany Indoneziana, izay midika fa ny Indoneziana irery ihany no afaka mampiasa ny endri-javatra rehetra sy ny serivisy an'ity fampiharana ity. Noho izany, raha tsy Indoneziana ianao dia aza mandany fotoana amin'ity sehatra ity ary mizaha fampiharana bebe kokoa amin'ny tranokala.
Tokony ho 18+ ilay olona miaraka amin'ny kara-panondrony, izay tsy maintsy hamarinin'izy ireo. Raha olona tsy ampy taona ianao dia tsy afaka miditra ao. Ireo roa ireo no fetra lehibe indrindra, izay zakan'ireo mpampiasa hiditra amin'ny serivisy misy.
Raha samy manana ireo roa ireo ianao dia mila mandalo doka fisoratana anarana tsotra fotsiny. Tsotra sy haingana ho an'ny mpampiasa ny fizotran'ny fisoratana anarana. Ny fiteny fampiharana dia indonezianina, izay manome ny mpampiasa hahatakatra mora foana ny teny sy ny fepetra tsirairay.
Ka, ny vola avo indrindra, azonao alaina avy amin'ny fampiharana ity dia 1,000,000 IDR. Izy io dia vola be dia be ho an'ny mpampiasa, saingy afaka mamaha izany olana izany ianao. Azonao atao ihany koa ny mangataka vola ambany kokoa sy ny sisa mba hahazoanao serivisy ahazoana aina bebe kokoa.
Ny tahan'ny zanabola dia mifanaraka amin'ny faharetan'ny indram-bola indramina. Manolotra ny zana-bola farany ambany indrindra amin'ny 3.5%, izay tsy maintsy aloanao amin'ny indram-bolao. Tena ambany dia ambany izany, fa raha te handoa isan-taona ianao dia mila mandoa indram-bola 14% farafahakeliny isan-taona.
Ny faharetan'ny fampindramam-bola dia zava-dehibe ho an'ny olona. Noho izany, manome fe-potoana maro izy io, izay azon'ny mpampiasa misafidy sy mandoa ny ampahany manontolo. Izy io dia manome fe-potoana farafahakeliny 91 andro ho an'ny mpampiasa ary 120 andro fara-fahakeliny izay tsy maintsy hamitanao ny fampindramam-bola rehetra.
Azonao atao ny manana ny serivisy tsara indrindra amin'ny fampiharana ity sy mankafy ny kalitaon'ny fiainana. Vahao ny olanao rehetra ary mankafy. Raiso ity rindrambaiko ity amin'ny fitaovanao Android ary ampidiro eo no ho eo ny fiasa sy serivisy rehetra. Makà fampindramam-bola ao anatin'ny iray minitra ary hamaha ny olana rehetra.
Raha te hanana indram-bola avo lenta ianao dia mahazo ny Rupiah Uwang. Izy io dia manome anao amin'ny fampindramam-bola ambony kokoa, izay tsy maintsy averinao. Noho izany, misy fampiharana bebe kokoa azo jerena amin'ity tranokala ity, izay ahafahanao mamaha ny olanao rehetra sy mankafy.
anarana Dana Mudah
Anaran'ny fonosana com.janesi.android.damh
Raha te hampidina ity rindranasa ity ianao dia eo amin'ny toerana mety. Hizara rohy fampidinana azo antoka sy miasa miaraka aminareo rehetra izahay, amin'ny alalàn'ny ahazoanao misintona mora foana ity app ity. Tadiavo ny bokotra fampidinana ary manaova paompy eo amboniny. Hanomboka ho azy afaka segondra vitsy ny fisintomana.
Makà findramam-bola eo noho eo
Fomba tsotra sy mora
Fepetra takiana misimisy kokoa
Mampindrana hatramin'ny 1,000,000 IDR
Tombana ambany indrindra
Vahao ny olanao rehetra, izay misy ifandraisany amin'ny vola amin'ny Dana Mudah Apk, ary mankafiza ny kalitaon'ny fiainana. Raha manana olana amin'ny fampiasana an'ity rindrambaiko ity ianao dia mifandraisa amin'ny fikarakarana ny mpanjifa azo alaina ao amin'ny fampiharana ary alao ny fampahalalana mifandraika rehetra.
Sokajy Apps, Lifestyle Tags Dana Mudah, Dana Mudah Apk, Dana Mudah App Post Fikarohana
NS Like Apk Download ho an'ny Android [Insta Popularity]